कोरोनामा जोखिमपूर्ण वन्दै गण्डकी प्रदेश !::Nepali News Portal from Nepal
कोरोनामा जोखिमपूर्ण वन्दै गण्डकी प्रदेश !
आत्तिनुहाल्नु पर्ने अवस्था छैन :प्रवक्ता बस्नेत
पोखरा, १ जेठ – सुरुमा गम्भीरतापूर्वक नलिइएको नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमित बढेपछि सबैको होस्–हवासै गुमाइ दिएको छ । सामाजिक दूरी कायम गर्दै, आफ्ना नागरिकलाई सरकारले महिना दिनदेखि घरभित्रै बसाउँदा पनि यो भाइरस हराउनुको साटो संक्रमितको संख्या उल्टो बढी रहेको छ ।
एकको दुई, दुईको तीन हुँदै कोरोना भाइरस संक्रमितले अहिले नेपालमा २ सयको अंक नाघिसकेको छ । तराईका जिल्लाहरुमा संक्रमितको दर एकाएक बढी रहेको छ । एउटा कर्णाली प्रदेशलाई छोडेर ६ वटै प्रदेशमा छिरिसकेको कोरोना भुसको आगो झैं सल्किदै गएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । उसो त, दुईजना कोरोना संक्रमितलाई निको पारेर घर पठाइसकेको गण्डकी प्रदेशलाई उसै पनि जोखिमपूर्ण प्रदेशको रुपमा इगिंत गरिएको थियो । त्यसमाथि, संक्रमित जिल्लाबाट लुकिछिपी प्रदेश छिर्नेहरुले खतरा बढाइरहेका छन् ।
प्रदेश छिर्ने नाका कडाई गरेर पूर्वाधार विकासका काममा लकडाउन खुकुलो पार्ने प्रदेशको योजना कतिसम्मको फितलो रहेछ भन्ने त पोखरामा घटेको मंगलबारकै घटनाले पुष्टि हुन्छ । एक युवा तरकारीको गाडीमा चढेर पोखरा भित्रिँदासमेत सुरक्षा निकायले पत्तो पाउन सकेन । गण्डकी सरकारले प्रदेश छिर्ने नाका कडाई गरेका छौं भनेर हवाल दिए पनि कोही कुरिनटारको झोलुंगे पुल हुँदै त, कोही पुन काम सुरुगर्ने बहानामा सुरक्षाकर्मीको आँखा छल्दै प्रदेश भित्रिरहेका छन् । यद्यपि, बेंगलुरुबाट आएका ती युवाको स्वाव परीक्षण पोजेटिभ देखिएन ।, उनी स्वस्थ रहेको प्रमाणित भयो । तर, यस्ता गतिविविधले गण्डकी प्रदेशमा थप खतरा बढाएको छ ।
क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बेडको अवस्था
केहीगरि भोलि भवितव्य आइहाले कसरी सामना गर्ने ? त्यसको लागि गण्डकी सरकारले के कस्ता तयारी गर्र्दैछ ? कोभिड–१९ को सम्भावित जोखिमको सामना गर्नको लागि तयारी अवस्थामा बसेको गण्डकी प्रदेशमा अहिले जम्माजम्मी ४ हजार ५ सय ५१ बेड रहेका छन् । स्वास्थ निर्देशनालयले आफ्नो वेबपेजमा ३० गते गरिएको अपडेट डिटेल अनुसार गण्डकी प्रदेशभरि ४ सय ३२ जना क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा २ सय ३५ बेडको आइसोलेसन खडा गरिएको छ । प्रदेशको २ सय ३५ आइसोलेसन बेडमा अहिले एउटा पनि बिरामी छैनन् । सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले तयारी अवस्थामा राखेको आइसोलेसन बेड संख्या अहिलेसम्म खालि रहनु निकै सुखद हो । यद्यपि, निकट भविष्यमा यो संख्यामा बृद्धि हुँदैन भनेर भन्न सकिने अवस्था अहिले नै छैन ।
लकडाउन सुरु हुनुअघि विदेशबाट गण्डकी प्रदेशमा भित्रिनेहरुको संख्या ५ हजार ३ सय ८३ छ । गण्डकी प्रदेशमा बुधबारसम्म विदेशबाट आएका र उनीहरुको सम्पर्कमा आएका ६ हजार ७ सय १६ जनाको ¥यापिड टेस्ट (आरडिटी) परीक्षण गरिएको थियो । ¥यापिड टेस्टमा पोखराकी एक महिलाको रिपोर्ट पोजेटिभ आए पनि पिसिआरमा उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो । यस्तै, ७ सय ५७ को पिसिआर विधिबाट कोरोना जाँच गरिएकोमा २ जनाको रिजल्ट पोजेटिभ आएको थियो । अझैं २८ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको गण्डकी स्वास्थ निर्देशनालयले जनाएको छ । कोरोना संक्रमित बागलुङका २ जना नै निको भएर घर फर्किसकेका छन् ।
प्रदेशको ट्रान्जिट पोइन्ट कास्कीमा जम्मा ३ सय ५ बेडको क्वारेन्टाइन र ७० बेडको आइसोलेसन खडा गरिएको छ । भोलि बिरामीको संख्या ह्वात्तै बढी हाले कहाँ राख्ने केही पत्तो छैन । निको भएर घर फर्केका संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको कोरोना जाँच गर्दा कोरोना नेगेटिभ आएको थियो । यद्यपि, अहिले नै सुरक्षित महसुस गर्न सकिने अवस्था भने छैन । हिजो मात्रै गलकोटबाट गएका १४ मजदुरमा कोरोना पोजेटिभ पाइएको थियो । सरकारले अत्यावश्यक क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो पारेसँगै अहिले घरबाहिर निस्किनेको संख्या पनि बढी रहेको छ । जुन जोखिमपूर्ण मानिन्छ ।
आत्तिनुहाल्नु पर्ने अवस्था छैन : प्रवक्ता बस्नेत
गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले आत्तिइहाल्नु पर्ने अवस्था अहिले नै नआएको बताएका छन् । केही समय अघि देखा परेका बिरामीहरु निको भइसकेको र उनीहरुमा त्यस्तो कुनै लक्षण नदेखिएको हुनाले पनि गण्डकी प्रदेशमा आत्तिई हाल्नुपर्ने अवस्था अहिले नै नआई सकेको उनले बताए । ‘पूर्व तयारी जे ग¥यौं । त्यो त छदै छ, बढ्यो, सकभर त त्यस्तो कुरै नगरौं,’ उनले भने, ‘ कुनै हालतमा त्यस्तो बढ्यो बिरामीहरु थपिए भने त ,जुन बेला अभाव हुन्छ । एउटा लक्षण त देखिन्छ नि त, ५ जना १० जना बृद्धिहुँदा हुँदै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’
क्वारेन्टाइन बनाउनका लागि अहिले बन्द भएर बसेका विभिन्न कार्यालय, स्कुल र समुदायसँग छलफल गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिने उनले बताए । ‘भयावह स्थिति आइहाल्यो भने त्यसको व्यवस्थापन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले विचार गरेको छ । मुख्य हस्पिटल गण्डकी अस्पताललाई नै बनाएका छौं । ५०, ६० बेड अस्ति भर्खरै थप ग¥यौं,’ उनले भने, ‘अस्पताल विकास गरेका छौं । जिल्ला अस्पताल पनि ११ वटै अस्पताललाई कमसेकम भेन्टिलेटर वार्ड व्यवस्था गरेर आइसोलेसन राख्ने तयारीमा छौं । बागलुङ तयार भई सकेको छ । गोरखा पनि तयार हुँदै छ, अरु जिल्लामा पनि यो काम अघि बढाई रहेका छौं ।’
कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढी हाल्यो भने पनि छोटो समयमा व्यवस्थापन गरेर बिरामीहरुलाई सहज रुपमा राख्न सक्ने योजना गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाइरहेको उनले सुनाए । उनले नाकाहरुमा कडाई गरिएको जिकिर पनि गरे । ‘हाम्रा नाकामा पनि कडाई गरिएको छ’, उनले भने, ‘संघीय सरकारले पनि बिहीबारदेखि कडा गर्ने भनेको छ । अहिले गण्डकी प्रदेशका नाका कडा पार्न भनेका छौं ।’
सडकभन्दा पनि अरु बाटोबाट लुकिछिपी आई रहेकमे उनको दाबी छ । सुरक्षाकर्मीको बाटो छलेर प्रदेश छिर्नेहरुलाई थप कडाइ गरिने उनले सुनाए । ‘बाहिरका मान्छेलाई आउन दिएका छैनौं । आइहाले पनि समाजले नै हामीलाई जानकारी गराउछ । र, हामीले उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने । विश्वमै महामारिको रुपमा फैलिइरहेको हुनाले आत्तिने, डराउने भन्दा पनि त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर सोच्नु पर्ने उनले तर्क राखे ।
भागेर कोही बाहिरबाट आइ हाले पनि समाजले नै जानकारी गराउँदै आएको उनले सुनाए । बागलुङका दुई संक्रमित निको भएर घर फर्किसकेपछि बिचमा विकास निर्माणका काम पनि थालेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘अलिअलि विकास निर्माणका काम पनि ग¥यौं । लकडाउन अलिकति खुकुलो पनि बन्यो । धेरै समय भयो कोरोना संक्रमण देखिएन नि त । त्यतातिर हामी लाग्यौं । अस्तिदेखि एक्कासी बढ्यो । भई सकेपछि सबै नाका कडा पार्ने । विकास निर्माणका काममा पनि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला मजदुरसमेत लैजान नपाउने गरि तयारी गरेका छौं ।’कोरोना संक्रमित बढी हाले नियन्त्रण गर्नु बाहेक अरु विकल्प नहुने उनले बताए । लकडाउनको बिचमा बाहिर गएका कामदार यो बीचमा कोही पनि नफर्केको उनको भनाई छ । प्रदेशभित्र रहेका कामदारबाटै फाट्टफुट्ट विकास निर्माणका काम थालेको उनको भनाई छ ।